Tiantai Yongzhu Hlunga Factory kuyinto nomkhiqizi enkulu Indwangu nonwoven e China. siye sanikela ekwandeni-investimenti ku ukukhiqiza, workshop, futhi imishini, ethula ku eziphambili isayensi lobuchwepheshe kanye kusuka kwelinye izwe.
Inkampani yethu ine amandla onamandla ukwakhiwa thina ikakhulu ukukhiqiza zokuhlunga impahla, uthuli isikhwama ukususwa, inaliti wazizwa, nonwoven isihlungi lendwangu air-conditioning zokuhlunga. Imikhiqizo yethu akhishwe zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-40, kuhlanganise mpumalanga Asia, Middle-Asia, e-Europe, e-Australia futhi Melika.
Thina njalo usichithe ucwaningo kwemikhiqizo emisha, futhi ithuthukiswe uchungechunge imikhiqizo, njengoba lokhu okulandelayo:
1) High-izinga lokushisa zokuhlunga izinto: Metamax inaliti wazizwa, FMS inaliti wazizwa, fiberglass inaliti wazizwa, PTFE ifilimu inaliti wazizwa, ifilimu zokuhlunga izinto, P84 inaliti wazizwa, PPS inaliti wazizwa, okungezona nokwelukiweyo zokuhlunga izinto. Basuke kabanzi isetshenziswa ukusetshenziswa ephezulu lokushisa uthuli ukususwa kule mboni ka yokusansimbi futhi aphele, senqabe nokushiswa, umusi amandla isizukulwane, izinto ukushisa-ekumelaneni, ibitume ukuyaluza, amalahle, usimende, coke, uwoyela evutha kubhayela, njll
2) Imikhiqizo Liquid-zokuhlunga: nokwelukiweyo isihlungi-indwangu, monofilament isihlungi-indwangu, polypropylene inaliti wazizwa, inaliti eziyinkimbinkimbi wazizwa, ezisetshenziswa kuleli indle imishini kulahlwa ezifana Uhlaka nebhande-uhlobo isihlungi-cindezela.
Ethembele siqu amandla ocebile, imishini eziphambili, imikhiqizo yethu eliphezulu futhi inkonzo ephelele, Haotian isivele yazuza amakhasimende kokubili ezifuywayo international bakwethembe. Inhloso yethu: We njalo sibeke izinga kanye credit esimweni kakhulu.
3) air-conditioning isihlungi mesh.Widely ezindaweni njengoba filtration nokuhlukaniswa umkhakha (Kabanzi lisetshenziswe ukudla filtration futhi umkhakha ukuhlunga), izimboni ka-petroleum, amakhemikhali, yokusansimbi, usimende, dedusting kwemvelo nolwami. Filtration amazinga kungaba kusuka 27% kuya ku-78%. Ezinjalo njengoba umkhakha ukudla Milling zokuhlunga nofulawa yokugaya, Milling nezinye izinhlamvu wokugaya. Thanda ukukhiqizwa glucose, ubisi powder, ubisi okuletha kukhompiyutha njll